Shabakadaha iyo aaladaha lagu helo doonyaha waqtiga dhabta ah | Maraakiibta Absolut
Goobta doonyaha waqtiga dhabta ah
Waxay u muuqataa in la ogaado waxa maraakiibta booska waqtiga dhabta ah Waxay yihiin waxyaabo laga soo qaaday filimada ama xirfadleyda kaliya ee u heellan waaxda badaha ayaa ogaan kara meesha uu ku yaal markab dalxiis waqtiga dhabta ah. Laakiin qasab ma aha inay sidaas ahaato haddii aad taqaan sida loo isticmaalo aaladaha ku habboon si loo gaaro.
Thanks to farsamada iyo internetka, waxaan isticmaali karnaa a Goobta markabka waqtiga dhabta ah si aad u hesho markab dalxiis isla markiiba adiga oo aan aqoon weyn u lahayn khariidadaha ama marinnada badda. Ogaanshaha aaladaha kuu oggolaanaya inaad si sax ah u ogaato oo waqtiga dhabta ah meesha ay maraakiibta dalxiiska ee ugu muhiimsan adduunka ay tahay wax wanaagsan, ay adag tahay in la helo laakiin runtii qiimo leh.
Marka xigta waxaan rabaa inaan qaar kaala hadlo shabakadaha iyo barnaamijyada lagu raadiyo doonyaha waqtiga dhabta ah. Waxaad awoodi doontaa inaad dareento inaad tahay maamule badeed oo yaa og? Waxaa laga yaabaa inaad aad u jeceshahay waayo -aragnimada oo aad runtii rabto inaad noqoto.
2 Gaadiidka Badda, doonyaha raadinta waqtiga dhabta ah
3 Sailwx, goob-markabka waqtiga-dhabta ah
4 Mapper Cruise
5 Shabakadaha kale si ay u arkaan booska maraakiibta dalxiiska ee waqtiga dhabta ah
Shabakadaan oo la yiraahdo livecruiseshiptracker.com Waa mid waxtar leh oo aad u madadaalo leh maadaama ay astaan ​​u tahay booska dhabta ah ee boqolaal dalxiis oo ah shirkadaha ugu muhiimsan adduunka. Waad ku mahadsan tahay degelkan waxaad samayn kartaa dabagal dhab ah oo ah marinnada safarka.
Caadiyan dadku waxay u muuqdaan inay eegaan dariiqyada maraakiibtaas iyagoo ka marag kacaya xiisaha iyo firaaqada, si aad si sax ah u ogaato halka markabka dalxiiska ee uu ku jiro xubin qoys ama saaxiib ay ku safrayaan ama laga yaabee inaad ogaato waxa ay yihiin waddada saxda ah iyo in sidan oo kale ah, waxaad go'aansan kartaa inaad qaadato safarkaas fasaxaaga xiga ama aad ka fikirto midka uu yahay si ka wanaagsan sida laga filayo.
Qaar ka mid ah shirkadaha ku soo biiray nidaamkan dabagalka waqtiga-dhabta ah ayaa uga mahadceliyay Google Earth. Faa'iidada kale ee maraakiibtan dalxiiska ee u hoggaansan nidaamkan raadraaca ayaa ah in la baari karo wakhti kasta, gaar ahaan haddii wax lama filaan ah dhacaan oo ay u baahan yihiin caawimaad xagga baddaha sare.
Qaar ka mid ah shirkadaha aad la socon karto adigoo uga mahadcelinaya degelkan waa:
Khadadka Cruise Disney
Khadka Holland America
Khadadka Luuqada Noorwiijiga
Liiskuna wuu sii kordhayaa ...
Gaadiidka Badda, doonyaha raadinta waqtiga dhabta ah
Haddaad gasho marinetraffic.com waxaad ka heli kartaa doonyaha waqtiga dhabta ah. Waa aalad u eg toy laakiin taasi waxay kuu sheegaysaa xaqiiqda maraakiibta ku sugan badaha sare xilligan. Waxaad raadin kartaa qaar gurigaaga ku dhow iyo kuwo kale oo kaa fog. Kaliya waa inaad isticmaashaa jiirkaaga oo dul saartaa markab kasta oo guji. Waxaad heli doontaa macluumaad iyo sawirro waaweyn si aad wax yar uga ogaato markabka.
Hal dhinac oo aan ka helo codsiyada noocaan ah ayaa ah haddii aadan waligaa jeclayn juqraafiga laakiin aad jeceshahay maraakiibta, ugu dambayn waxaad awoodi doontaa inaad barato juqraafi yar. Laakiin haddii taa beddelkeeda, haddii aad jeceshahay juqraafiga iyo sidoo kale doonyaha, markaa ... waad jeclaan doontaa codsigan.
Way fududahay in la fasiro xogta sidoo kale waa wax aad u sahlan inaad naftaada u jihaysato isticmaalkeeda. Way shaqeyneysaa waxayna sidoo kale kaa caawinayaan xoogaa xog ah oo aad ka raadin karto shabakadda. Waxaad raadin kartaa maraakiibta dalxiiska ama maraakiibta xamuulka ah. Adigu waad dooratay, laakiin haddii aad jeceshahay doonyaha, waxaad yeelan doontaa madadaalo badan adoo adeegsanaya codsigan.
Sailwx, goob-markabka waqtiga-dhabta ah
Haddii aad leedahay saaxiibo ama xubno qoyskaaga ah oo saaran markab dalxiis oo aad rabto inaad ogaato meesha ay ku sugan yihiin, shabakaddan - arjiga ayaa waliba laga yaabaa inay fursad fiican u tahay inaad ogaato. Waxa kale oo suurtogal ah inaad sugto markabkaaga oo aad dareento welwel inaad ogaato inta hadhay ilaa ay gaadho dekedda sidaasna aad ku bilaabi karto wakhtigaaga fasaxa.
Internetku waa saaxiibkaaga wuxuuna kaa caawin doonaa inaad ogaato waqtiga dhabta ah booska markab kasta. Qaar ka mid ah maraakiibta ayaa diyaar u ah inay ku bixiyaan macluumaadkan boggooda internetka, laakiin haddii kale, waxaad sidoo kale haysataa ikhtiyaarka inaad booqato bogag internet oo khaas ah. sida Sailwx . Bogga ugu weyn waxay u ekaan kartaa waxoogaa dhib badan in la fahmo, laakiin haddii aad fiiro gaar ah u yeelato waxaad ogaan doontaa inay arrintu fudud tahay.
Bogga ugu weyn waxaad ku yeelan kartaa dulmar guud oo kusaabsan macluumaadka ku saabsan maraakiibta waana inaad kaliya raadsataa gobol gaar ah adigoo ku dhajinaya khariidada. Waxaad bilaabi doontaa inaad aragto maraakiib badan oo dalxiis ah oo hadda socda marka aad ka eegayso shabakadda ama ku xiran dekedaha dhowaan yimid ama sugaya inay baxaan.
Waad ku mahadsan tahay internetka, maanta waxaa suurtagal ah in la ogaado booska markab kasta oo dalxiis ah waqtiga dhabta ah. Qaar ka mid ah shirkadaha maraakiibta ayaa na siiya macluumaadkan boggooda internetka, inkasta oo haddii aad rabto inaad aragto aragti guud ee maraakiibta ku safraya badaha, wax ka wanaagsan booqashada Sailwx ma jirto. Laga soo bilaabo boggeeda hore waxaan yeelan doonnaa aragti aad u ballaaran in kasta oo aan ka heli karno macluumaad faahfaahsan gobol kasta annagoo gujineyna zoomka. Waxaad la yaabi doontaa marka aad aragto tirada badan ee maraakiibta dalxiiska ee ku shiraacda ama ku soo xirta dekadaha.
En Mapper Cruise Waxa kale oo aad ku raaxaysan kartaa goob-markab waqtiga-dhabta ah si aad u ogaato halka markab gaar ahi yaallo. Haddii aad gasho shabakadda waxaad ogaan doontaa in ay aad u sahlan tahay in la socdo.
Intaa waxaa dheer, waxaad haysataa doomaha midabyo kala duwan leh iyadoo ku xiran mid walba, wax shaki la'aan fududeyn doona raadinta shirkadda maraakiibta gaarka ah ee aad danaynayso inaad hesho.. Waxaad sidoo kale heli kartaa maraakiib iyo haddii aad si fudud u rabto inaad ogaato shirkad maraakiib oo aan kala sooc lahayn ama markab, Kaliya waa inaad dul dhigtaa jiirka oo guji, si aad u hesho macluumaadka aad rabto inaad aragto.
Kuwani waa qaar ka mid ah kuwa ugu fudud in la isticmaalo degellada iyo codsiyada kuwaas oo aad ugu fudud inaad ku raaxaysato.
Shabakadaha kale si ay u arkaan booska maraakiibta dalxiiska ee waqtiga dhabta ah
Waxa kale oo jira kuwo kale oo aad isticmaali karto si aad u ogaato midka aad jeceshahay ama midka leh maaraynta adiga kugu habboon. Kuwa kale ee aad sahamin kartaa waa:
Hadda oo aad ogtahay ku filan qalabkan si ogow booska doomaha waqtiga dhabta ahHa ka waaban inaad hesho midka aad ugu jeceshahay oo aad ku raaxaysato raadinta jagooyinka doonyaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Maraakiibta Absolut » General » Goobta doonyaha waqtiga dhabta ah
Kanaalka si aad u gudubto ka hor intaadan dhiman
Raadiyeyaal Maraakiib Jaban
Hel heshiisyadii ugu dambeeyay ee dalxiiska.
Hagaha shirkadaha maraakiibta